Ny iMac M1 reconditioned an'i Apple dia tonga tao amin'ny tranokalan'i Spain | Avy amin'ny mac aho
Ny zoma 20 aogositra lasa teo, ny orinasa Cupertino dia nandefa sambany tany Etazonia andiana maodely iMac namboarina miaraka amina processeur vaovao M1. Ao amin'ny ireo mpampiasa monina any amin'ny firenen-kafa any an-dafin'i Etazonia dia manana modely sasany amin'ireo iMac vaovao natomboka tamin'ny 2021 ireo ihany koa. Raha ny lojika dia ny maodely 24-inch miaraka amina fikirakirana manokana, tsy azon'ny mpampiasa atao ny manitsy azy io amin'ny fotoana ividianany.
IMac nohavaozin'i Apple dia afaka mandeha vaovao
Apple Refurbished iMacs dia manana antoka maharitra iray taona ary amin'izao fotoana izao dia toa tsy dia ampy ny Stock satria ekipa natolotra tamin'ny volana aprily tamin'ity taona ity. Ny zavatra tsara indrindra momba ireo iMac voaverina ireo dia ny tahiry azontsika tratrarina rehefa miatrika fitaovana izay "tsy vaovao". Ao anaty boaty an'ireo iMac ireo dia ampiana tsirairay ny kojakoja rehetra izay ampiana ao anaty iMac vaovao, tsy misy zavatra tsy ampy ary afaka misafidy isika na hividy ny AppleCare + na hanana fotoana fiantohana lava kokoa amin'ny fitaovana.
Ireto ekipa ireto ankehitriny dia somary zara raha eo amin'ny sisa amin'ny iMac izay ananany, saingy azo antoka rehefa mandeha ny herinandro dia modely sy fanamafisam-peo maro no ampiana amin'ity fizarana nohavaozina ity. Raha mbola manoratra ity lahatsoratra ity izahay dia mahita maodely roa misy, ny iray amin'ny volomboasary ary ny iray amin'ny manga. Ny maodely iMac voasary dia manampy memoara mitambatra 16 GB sy SSD 512 GB, raha amin'ny tranga manga kosa dia maodely RAM 16 GB sy SSD 1 TB.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » iMac » Ny iMac M1 reconditioned an'i Apple dia tonga tao amin'ny tranokalan'i Espana
Tranonkala iray ho an'ny mpiasa Apple hizara traikefa amin'ny fanorisorenana sy fanavakavahana ao amin'ny orinasa